FAQs - Hongwugas Gas TAPAKA FANTSONA System
Hongwugas ™ mety tsara
Inona no atao hoe CSST?
Mitafo fanitso Stainless Steel Tubing (CSST) dia malefaka, Stainless vy sodina ampiasaina mba hanome voajanahary mandatsa-dranomaso sy propane amin'ny ponenana, ara-barotra sy ny orinasa rafitra.
Nahoana no mahasoa ny malefaka TAPAKA FANTSONA mandatsa-dranomaso?
Ankoatra ny fanomezana lehibe kokoa mateza, CSST dia malefaka, mamela azy io ho snaked manodidina ny manda sy amin'ny alalan'ny sakana amin'ny Fittings ilaina afa-tsy amin'ny faran'ny nihazakazaka tsirairay. Fampihenana ny isan'ny Fittings dia mahasoa toy ny tsirairay mpiray fanampiny tokony homarinana avy amin'ny teny mendrika sy ho an'ny tete azo. A CSST entona rafitra TAPAKA FANTSONA tsy manana tonon-taolana, ary noho izany dia tsy mety mandefa lalana .
Tsy CSST soa aman-tsara ny fampiasana ao an-tokantranoko?
Toy ny rehetra nankatoavina entona TAPAKA FANTSONA rafitra, CSST dia azo antoka raha araka ny tokony ho napetraka. CSST dia tsy maintsy nametraka ny matihanina sy ny mahafeno fepetra araka ny Manufacturer ny Design sy ny Installation (F & I) Guide, anisan'izany ny firaiketam-po sy ny grounding ny rafitra.
Inona no atao hoe firaiketam-po sy ny grounding?
Firaiketam-po: Mampifandray metaly mba hametraka rafitra elektrika sy ny fitohizan'ny conductivity.
Grounding: Mampifandray tamin'ny tany, na any amin'ny iray conductive vatana izay miitatra ny nitoto fifandraisana.
National Association-panjakana Marshals Fire (Nasfm) nandefa Nation Yellow Csst Safety Fanentanana NASFM mitehaka US Antenimieran-doholona noho ny Fanapahan-kevitra Mampirisika nony nandalo ny Fanabeazana Ezaka Hanatsarana ny fiarovana any amin'ny tany maherin'ny 6 tapitrisa ...
Copyright © HONGWUGAS - 2010-2017: All Rights Reserved. - Power ny Globalso.com